Deepin 15.7, vhezheni inovimbisa kukurumidza kupfuura Ubuntu | Linux Vakapindwa muropa
Deepin 15.7 aburitswa muna Nyamavhuvhu 20, vhezheni yakanangana nekugadzirisa uye kugadzirisa mashandiro, zvirinani zvine chekuita neshanduro yayo yapfuura, Deepin 15.6. Deepin ndeye kugoverwa kwakavakirwa paDebian kwakamira mumwedzi ichangopfuura yekushanda kwayo, maficha uye ayo aesthetics.
Iyo Deepin timu yakaburitsa magirafu uye infographics pane zvakanakira iyo nyowani Deepin 15.7, yekuziva data nekuti haisi chete iyo inovandudza ichienzaniswa neyakare vhezheni asi zvakare inovandudza zvakare paWindows 10 uye Ubuntu pachayo.Iyo yazvino vhezheni ye Deepin yakanangana ne aesthetics uye iyi vhezheni nyowani inotarisa mukugadzirisa. Chimwe chezvinhu zvakagadziridzwa huwandu hwepakeji, idzo dzakadzikiswa zvakanyanya uye mapakeji akachengetedzwa akagadziridzwa. Shandisheni yemagetsi yakagadziridzwa zvakare, inosvika 20% zvimwe kuzvitonga mumidziyo inoshandisa bhatiri.
Asi chinotyisa kwazvo chave chiri ram ndangariro yekushandisa panguva yekutanga bhuti, iyo yekutanga iyo inogara ichidya zvakanyanya kupfuura mamwe ese ekutanga. Deepin 15.7 inoshandisa 833 Mb ichienzaniswa ne1,1 Gb yegondohwe iro Ubuntu rinoshandisa panguva yekutanga kwaro.
Iyo doko rekuparadzira rakagadziridzwawo, kugadzirisa madhidhiji akaita senge network yekutanga yekuita zvirinani. Chimwe chinhu chinomira mushanduro iyi nyowani ndeche kuiswa kweNvidia Prime, mutyairi wemakadhi eNvidia uye machipisi. Chero zvazvingaitika, ini handifunge kuti dambudziko rekushanda kwemamwe mamodheru riri mukuparadzira, asi zviri mukuburitswa kwevatyairi.
Kana iwe uchiri usina Deepin pakombuta yako uye iwe uchida kuyedza, mukati iyo yepamutemo webhusaiti Iwe unogona kuwana zvekuburitsa zvinongedzo zveiyo ISO mifananidzo pamwe nezvinyorwa zvekuisirwa kwavo uye mamwe matambudziko anogona kuvapo nemamwe marudzi ehurdware.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Deepin 15.7, vhezheni inovimbisa kukurumidza kupfuura Ubuntu
Hazvireve kuti idambudziko rakaoma kana, dai vaive vati vaizokurumidza kupfuura Debian.
Ubuntu pachayo inokurumidza nekungochinja mamiriro ezvinhu ayo.
Cristina Marcielagos Cheste akadaro
Ini handivimbe nekuparadzirwa uku nekuti iChina uye ndinofunga kuti hurumende yeChinese ine chimwezve chishandiso chekutisora
Pindura kuna Cristina Marcielagos Cheste
Chii chinoitika neiyo luks encryption mune yakadzika 15.7, ndinorangarira kuti mukutanga kwayo yaive nayo, chii chinoitika ikozvino nayo.
Ndakafarira chinyorwa, kuti icho chinotaura nezve technical tekinoroji dzekugovera iri kuita nzira yayo, asi ini ndinofunga zvakakosha kutaura pamusoro pezvakanangana nezvechengetedzo. Kwete nekuti ivo maChinese, isu tinofanirwa kuona zvinoitika neUbuntu nehukama hwayo neAmazon, zvinoitika panguva imwe chete nezvipo izvo, kunyangwe zvanaka sei kana izvo zvinounza nhau zhinji mukuvandudzwa kwavo, senge fedora, zvinobva kumakambani Kuvanzika & Kuchengetedzwa?.
Ini ndinotenda mune zvirevo zvekutanga kweLinux, asi zvatinoita senharaunda yeLinux kutsigira kugoverwa senge DEBIAN kana TAILS, iyo inotsvaga kuchengetedza izvo zvinowanzotaurwa nezvazvo uye zvichishamiswa neLinux.
Iwe hautendi kugoverwa uku kweChinese? Asi chii chimwe, kuvhurwa sosi kune anogara ari zviuru makumi maviri emaziso maziso achitsvaga chimwe chinhu chinoshamisa.
Morty sanchez akadaro
babamunini vakandibata chibharo ndichiri mudiki
Pindura Morty Sanchez
Izvo hazvivimbise kuti zvakatozvizadzisa, zvirinani kupfuura chero imwe yekutaura-maziso distro ine inoyevedza kwazvo interface.
Andrew Henriquez akadaro
Iyo ndiyo yakanakisa mukugadzikana uye ikozvino kana iwe uchida zvinoonekwa nekukurumidza kumhanya kuiisa pasi pejfs kana xfs faira system ivo ndivo vanonyanya kukurumidza chii chiri ex4 ikamba iri mumafiripi.
Pindura Andres Henriquez
Iwe hautendese iyi distro nekuti chiChinese, asi zvakadaro unonyora kubva windows pc ... iko kusawirirana kwako !!